हाल १३ संस्थाले हकप्रद सेयर जारी::KhojOnline.com
हाल १३ संस्थाले हकप्रद सेयर जारी
जेठ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले आफु मातहतका कम्पनीहरुलाई तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा हाल १३ संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गरिरहेका छन् ।
वित्तीय संस्थाहरुमा सहयोगी बिकास बैंक, गोर्खा बिकास बैंक, ज्योती बिकास बैंक, तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सानिमा बैंक, गरिमा बिकास बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ डभेलपमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंकले जारी गरिरहेका छन् ।
बिमा कम्पनीहरुमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले सेयर जारी गरिरहेका हुन् ।
त्यस्तै, सनराइज बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, हाम्रो बिकास बैंक यसै महिना हकप्रद जारी गरिरहेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले जेठ ७ गतेबाट १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंककको सेयरमा बैशाख २५ गतेसम्म स्वामित्व हुनेले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ । हकप्रद जारी पछि बैंकको पुँजी ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
हाम्रो बिकास बैंकले पनि जेठ ७ गतेबाट १ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । बैंकको सेयरमा बैशाख १० गतेसम्म सेयर स्वामित्व रहेकाहरुले लगानी गर्न पाउने छन् । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबीएल क्यापिटल रहेको छ । बैंकको पुँजी ४५ करोड ८७ लाख पुग्ने छ ।
सनराइजले १० बराबर ३ अनुपातमा जेठ १६ गतेबाट हकप्रद जारी गर्ने भएको हो । यसको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । बैंकको हकप्रदपछि पुँजी ७ अर्ब ८ करोड पुग्ने छ भने यस आवको नाफापछि १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सकिने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्ममा अव जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
आव २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी रु. ८ अर्ब पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७४ असारसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउँनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले पनि यो अवधिमा रु. ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
बुध, जेष्ठ ३, २०७४ मा प्रकाशित
गैरआवासीय नेपाली शेष घले र पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिए
जेठ, काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । गत वर्ष १०१ औं स्थानमा रहेका घले यो वर्ष ठूलो फड्को मार्दै ८१ औँ नम्बरमा उक्लिन सफल भएका हुन् । अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूची प्रकाशन गर्ने बिजनेस...
उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट अच्युत
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रहरु आज अन्तरास्ट्रिय स्तरका बन्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र उधोगमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नौलो प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई उच्चस्तरको बनाउनमा भिजुअल इफेक्टको ठुलो हात रहेको पाइन्छ । चलचित्र निर्माणका बिभिन्न पाटाहरु जस्तै निर्देशक,कथा,गीत,संगीत छायाँकन,सम्पादन जस्तै...
चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएको हो । योसँगै अब घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत...
प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल
चैत काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल भएको छ । तोकिएको समयभित्र यस्तो विवरण नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नजिकिँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अलमल भएको छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...
सामाखुशी टाउन प्लानिंगमा नयाँ पाटे थकाली भान्छाघर तथा रेष्टुरेन्ट खुल्यो
सामाखुशी टाउन प्लानिंगमा नयाँ पाटे थकाली भान्छाघर तथा रेष्टुरेन्ट खुल्यो / उक्त भान्छाघर तथा रेष्टुरेन्टमा यहि फागुन २४ ,२५ ,र २६ गते सम्म २०% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ /पारिवारिक बातावरणमा स्वस्थ र सफा खाना पाइनुका साथै बिभिन्न सेमिनारहरु संचालन गर्न पनि सकिने...
बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्करपियो गाडीमा शाक्यको शव भेटिए
फागुन, बिराटनगर । मोरङका एक युवकको अपहरणपछि हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ । मोरङ, उर्लावारी ७ का ३३ वषर्ीय सनम शाक्य मंगलबार अपहरणमा परेका थिए । उनलाई बन्धक बनाएर राखेको सूचनाका आधारमा अपराध महाशाखा र स्थानीय प्रहरीको टोलीले...